Tababaraha Liverpool Klopp maxuu ka yiri Isku aadkii Champions Leage, yuusa Rajeeynayay in uu ku beegmo?
Sunday, March 24th, 2019 - 09:41:52
Saturday April 14, 2018 - 01:10:21 in Wararka by
Tababaraha kooxda Liverpool ayaa si deg deg ah uga falceliyey in kooxdiisu ku aaday kooxdii casharka u dhigtay Barcelona ee AS ROMA, wuxuuse beeniyey in kooxdiisu ay marwalba ka cararaysay ku aadista Real Madrid iyo Bayern Munchin.
Liverpool ayaa la ciyaari doonta kooxda reer Talyaani ee Roma wareega Afar dhamaadka ee Tartanka kooxaha qaarada Yurub.
"Ma ahan inaan ku fekerayo Alle ayaa mahad leh aan nagu aadin Madrid, Alle ayaa mahad leh aan nagu aadin Bayern Munchin, haa Roma ama Dhinaca kale”, ayuu yiri macalin Jurgen Klopp oo lahadlay webka rasmiga ah ee kooxdiisa.
"Waa isku aad, waana ogsoonahay inay aad u xiiso badan tahay, laakiin waa war wanaagsan maxaa yeelay arrinta ugu muhiimsan ayaa ah inaan weli sii ciyaarayno tartarnka”, ayuu yiri markale.
Sawirka idin muuqda waa Klopp oo Daawanayay qaabkii uu u dhacayay isku aadkii wareega Semi-Finalka ee Champions Leage:
"Koox kasta waan ku beegmi karnaa, waxaana dhihi karaa oo kaliya waa inay jirto fursad maxaa yeelay tani waa kubadda cagta, kaliya waxaan u sheegayaa kuwa aaminsan Roma waa fursad inay dib u daawadaan lugtii 1aad iyo tii 2aad ee kulamadii Barcelona.